You searched for alahady - Page 2 sur 9 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 15 Novambra 2020“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO « Ivom-bokatry ny SAMPATI Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no tanterina amintsika izao. Razarasoa Josie (SIHOTSY Tabia) no nitarika ny fotoana. Razafiarisoa Tiana, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Rasoanarivo Koloina no nitari-bavaka sy nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Taloha. Rakotomavo Mirana sy Radimimanana …
Continuer la lecture de « Alahady 15 Novambra 2020 »
Publié le 15 novembre 2020 24 novembre 2020
Alahady 08 Novambra 2020
Alahady 08 Novambra 2020“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO « Ivom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao. Alahadin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Solofo RAKOTOSEHENO no nitarika ny litorjia. ANDRIANILAINA Six, Loholona no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia …
Continuer la lecture de « Alahady 08 Novambra 2020 »
Alahady 25 Oktobra 2020“MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA” IVOM-BOKATRY NY SAMPANA FIFOHAZANA Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao. Nisy fivorian’ny ankatoky ny fandraisana taloha’izany. Alahadin’ny SAFIF androany. ANDRIANJAFIMASY Harinaivo no nitarika ny litorjia. RAZAFIARIMALALA Nathalie Christine, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Solontena avy amin’ny STK no nitarika ny …
Continuer la lecture de « Alahady 25 Oktobra 2020 »
Alahady 18 Oktobra 2020 “MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA” Alahady ivom-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno Alahady 18 Oktobra 2020, Alahady fahatelo ibanjinana ny lohahevitra “Mirosoa amin’ny fonoana masina”. Ny fidirana faharoa tamin’ny 10ora maraina no nangalàna izao tatitra izao. Alahady natokana itondrana am-bavaka ny MAMRE. Anio no ivom-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno. Ramatoa RABAKO Miora no …
Continuer la lecture de « Alahady 18 Oktobra 2020 »
Alahady 11 Oktobra 2020“MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA” Alahady ivom-bokatry ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny Alahady 11 Oktobra 2020. Alahady ankalazaina ny ivombokatry ny sampana tanora kristiana. Alahady hitondrana ambavaka ihany koa ny SP Andrefana noho ny faha 25 taonany. Mbola mibanjina hatrany ny lohahevitra « Mirosoa amin’ny finoana Masina » isika. Nitarika ny fotoana anio ny Rtoa …
Continuer la lecture de « Alahady 11 Oktobra 2020 »
Alahady 11 Oktobra 2020. Alahady ankalazaina ny ivombokatry ny sampana tanora kristiana. Alahady hitondrana ambavaka ihany koa ny SP Andrefana noho ny faha 25 taonany. Mbola mibanjina hatrany ny lohahevitra « Mirosoa amin’ny finoana Masina » isika. Nitarika ny fotoana anio ny Rtoa Fy Rakotomalala, mpianatra ho mpitandrina. Ny nanao ny vavaka sy ny vakiteny dia ireo …
Continuer la lecture de « Alahady 11 Oktobra 2020 :: Alahady STK »
Alahady 04 Oktobra 2020“MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA” Alahady hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy. Alahady natokan’ny Fiangonana hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy, Alahady faha 17 manaraka ny Trinité, alahady himbanjinana indray ny lohahevitra vaovao manao hoe « Mirosoa amin’ny finoana Masina » Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao, …
Continuer la lecture de « Alahady 04 oktobra 2020 »
Alahady 27 Septambra 2020 “MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ANDRIAMANITRA” Alahady hitondrana am-bavaka ny katekomena “MIJORO” Faha 16 FFP Alahady natokan’ny Fiangonana hitondrana am-bavaka ny katekomena “MIJORO” ity. Alahady faha 16 manaraka ny Trinité, alahady hitondra am-bavaka koa ny FFP ary alahady mamarana ny lohahevitra « Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra » izay nobanjinina nandritra ny volana septambra. …
Continuer la lecture de « Alahady 27 septambra 2020 »
ALAHADY 20 SEPTAMBRA 2020 » Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra « Ny fotoana faharoa tamin’ny 9 ora no taterina amintsika izao. Ranivoson Toky, Diakona, filohan’ny Sampana Taninketsa no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina,Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ireo ankizy mpikambana ao amin’ny taninketsa no nanao ny vavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra Masina. …
Continuer la lecture de « Alahady 20 septambra 2020 »